FAQ any Minghe Casting - Casting Minghe
Votoatin'ny fanekena fitaovana fanodinana Die vaovao
Rehefa apetraka ny lasitra famoahana maty vaovao, satria tsy misy ny fahatakarana mifanaraka amin'ny lafiny rehetra amin'ny asany, ilaina ny manamarina ity atiny manaraka ity mandritra ny fanekena.
Mazava sy marina ve ny nomeraon'ny bobongolo?
Inona ny savaivon'ny varingarina ara-nofo?
Inona ny eccentricity eo ambanin'ilay lasitra?
Inona ny elanelan'ny lavaka ejector?
Inona ny habe sy ny elanelan'ny lavaka famatorana?
Tombam-bidin'ny lesoka bobongolo ≤ 0.1mm (zahao ny indentation manodidina ny lavaka)?
Fahasarotan'ny velarana Ra≤0.4μm?
Tsy misy fahasimbana, ratra na triatra ety ambonin'ny vava?
Afaka miala amin'ny fametahana jamina ve ilay thimble sy ilay slider?
Ny fotaka bobongolo azo ovaina sy raikitra dia 0.02 ~ 0.06mm avo kokoa noho ny fotaka bobongolo?
Mety sy mora ve ny fandaminana ireo loaka peratra eo amin'ny fototr'ilay bobongolo, takelaka ambony, lozisialy fanitsiana thimble sy tongotr'ireo tongotra?
Voamarika mazava ve ny fidirana sy ny fivoahan'ny rano mangatsiaka?
Mifanaraka amin'ny famaritana ny fantson-drano iraisan'ny orinasa ve ny fantsom-pifamoivoizana farany?
Mifanaraka amin'ny famaritana ny fampifangaroana fantsom-pitantanana solika mahazatra ve ny fantsom-bozaka vita amin'ny lasitra hydraulic?
Moa ve ny mpamatsy manome tsorakazo sy tehina ambony?
Manome faritra hafa ve ny mpamatsy?
Manome sary ny faritra ve ny mpamatsy?
Moa ve ny mpamatsy manome ny fanamarinana ara-materialy sy ny tatitra momba ny fitsaboana hafanana?
Avo dia avo ny vidinao ary afaka mahazo vidiny ambany kokoa amin'ny mpamatsy hafa aho.
Voalohany, afaka mahazo vidiny ambany kokoa ianao avy amin'ireo mpamatsy sasany ao Shina. Tsy misy vidiny ambany indrindra any Sina mihitsy. Misy ihany ny vidiny ambany ambany kokoa.
Mazava ho azy, raha zakao ny karazana olana isan-karazany ary ny fanoloran-tena amin'ny famokarana mora vidy kokoa. Ny vidiny dia mora kokoa $ 1 noho isika ary afaka mahazo 10000 USD amin'ny faritra 10000 pcs ianao. Saingy ho very mihoatra ny 10000 USD ianao, vao mainka ho very mpanjifa mahatoky raha sendra olana ara-mekanika. Mandritra izany fotoana izany, heveriko fa tsy afaka mahazo fahombiazana bebe kokoa amin'ny famatsiana ianao rehefa mahazo vidiny izay ambany noho ny 0.5-1 USD satria miankina amin'ny serivisy samihafa ny elastika amin'ny vidiny.
Ary farany, ianao dia manam-pahaizana manokana amin'ny rakitra, raha afaka manome anao tolotra izay ambany kokoa noho ny vidiny aza izy ireo. Ahoana ny hevitrao momba izany.
Ny zavatra ho azonao dia ny nandoavanao vola.
Azonao atao ny miantso ahy raha manana fanontaniana ianao dia hamaly anao faran'izay haingana izahay!
Voalohany, ny mpanjifa dia afaka mandefa ny santionanao na ny sarinao, toy ny sary 2D sy 3D (endrika IGS na STP)
Faharoa, ireo injenieranay dia hijery tsara ny sary ary hanome anao ny vidiny tsara kokoa.
Fahatelo, raha manaiky ianao dia voamarina ny baiko.
Aiza ny orinasa misy anao?
Ny orinasanay miorina ao Dongguan izay tanàna mahafinaritra izay tena akaikin'ny tanànan'i Guangzhou sy Shenzhen. Azonao atao ny manidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Shenzhen Bao'an (ZGSZ) na seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Guangzhou Baiyun (ZGGG), handray anao amin'ny seranam-piaramanidina ianao.
Orinasa izahay. Manome anao serivisy mijanona iray izahay, manomboka amin'ny famolavolana bobongolo ka hatramin'ny ampahany farany.
Karazana aliminioma na metaly zinc inona no ho entinao manary azy?
Ho an'ny faritra aluminium:
Ho an'ny Zinc:
Fizarana ho an'ny: Fiara, bisikileta, fiaramanidina, zavamaneno, fiaramanidina, fitaovana optique, sensor, modely, fitaovana elektronika, fonosana, famantaranandro, milina, milina, fanaka, firavaka, jigs, telecom, jiro, fitaovana fitsaboana, fitaovana fakana sary, robot, Sary sokitra, fitaovana fanamafisam-peo, fitaovana fanatanjahan-tena, fitaovana, kilalao ary maro hafa.
Orinasa mandefitra maty ISO9001 / TS16949
Mpamatsy voamarina SGS
Casting Aluminium maty vacuum, fonosana vovoka
Fitaovana famonoana potsim-paosotra voafetra
CMM, fitaovana X-ray Inspecition ao an-trano
Serivisy fanodinana cnc 1mm- 1600mm
Kely tantanan'i Metal Rapid Prototyping
Famolavolana maimaim-poana, famokarana batch kely
vahaolana iray ajanona avy amin'ny foto-kevitra mankany amin'ny fivoriambe
Manam-pahaizana momba ny aluminium
Die Casting | Tantaran'ny aliminioma (Extrusion) | Fanariana fasika | nohitsakitsahiko
Ahoana ny fandefasana azy?
Ny santionany amin'ny casting casting sy ny machining cnc sns na baiko kely dia matetika alefan'ny TNT, FEDEX, UPS sns ary ny baiko lehibe dia alefa amin'ny rivotra na an-dranomasina aorian'ny fanamafisan'ny mpanjifa.
Ahoana ny fomba hitsitsiana ny vidiny?
zavatra iray tsy ho hitanao intsony ny manipy maty dia ny fako
angamba misy rangotra. tsara tanteraka izany ary tsy mendrika hatsipy ao anaty lafaoro
raha azonao atao ny manaiky fa olana tsy mahafaty dia tazomy tsy ho very maina ireo fitaovana an-tapitrisany kilao
ary ampio ny mpanjifa maro toa anao mitahiry vola be
Inona no fepetra takinao amin'ny fandoavanao?
Fandoavam-bola ho an'ny Cast Cast: ny fandoavam-bola 40% aorian'ny sonia fifanarahana;
Ny fandanjalanjana 60% dia homena aorian'ny fankatoavan'ny mpanjifa ny bobongolo.
Ny fe-potoana fandoavam-bola amin'ny fandefasana die: T / T, 30% toy ny fametrahana vola alohan'ny famokarana amin'ny T / T, 70% aloa alohan'ny fandefasana.
Ahoana ny fomba hahazoana teny nindramina?
Alefaso azafady izahay sary amin'ny sary IGS, DWG, STEP sns. Mety tsara ny ohatra raha tsy misy sary, dia hanangana sy handefa anao ny casting casting izahay, ny cnc milina fanaovana sary mba hamafisina alohan'ny nitanisa. Mandritra izany fotoana izany dia hitazona ny fampanantenanay izahay momba ny tsiambaratelon'ny sary.
Tsy misy fepetra takiana amin'ny MOQ.
Miankina amin'ny dingana tianao hofidiana,
Ho an'ny famoahana ho faty: ekenay ny habetsaky ny malefaka manoloana ity tetikasa vaovao ity. firaisana ara-nofo ankapobeny: 500 pcs
Ho an'ny famoaham-bola: ekenay ny habetsaky ny manovaova raha jerena ity tetikasa vaovao ity. firaisana ara-nofo ankapobeny: 500 pcs
Ho an'ny fanariana fasika: ny volavolam-be malefaka dia ekenay manoloana ity tetikasa vaovao ity. firaisana ara-nofo ankapobeny: 500 pcs
Ho an'ny machining cnc: tsy misy moq
Mampiseho ny ampahany amin'ny fomba vaovao ve ianao?
Miala tsiny fa ny ampahany nankatoavin'ny mpanjifa ihany no asehoko, na ny ampahany amin'ny fomba taloha.
Satria nanao sonia ny NDA aho ary tsy mampiseho afa-tsy ny fahaizan'ny Fabrication and Service mekanika – die casting china, cnc machining cnc, Assembly
tongasoa eto amin'ny www.diecastingcompany.com, Misaotra
Ahoana ny fomba hitsidihana anay?
Ny orinasa misy antsika akaikin'ny HK, seranam-piaramanidin'i Shenzhen, Dongguan Humen High Speed ​​Railway Station,
Mitadiava mpamatsy casting, cnc machining fatory.
Tongasoa eto hitsidika anay, mety be avy any Hk mankany dongguan.
Faly koa izahay manampy anao amin'ny famandrihana trano fandraisam-bahiny sy amin'ny famandrihana trano fandraisam-bahiny.
Maninona ny vidinao no mitombina kokoa noho ny mpamatsy Sina hafa?
1.Ny fitaovana famonoana maty: Lee KEE Group aluminium & zinc ary sns
2. Masinina fanariana maty: LK GROUP, YIZHIMI Group, lijie
3.Mampiasà angovo maintso, vonjeo izao tontolo izao: Huawei, gazy voajanahary, herinaratra ——fidio izahay, ho an'ny Minghe Casting.thanks
4, bobongolo famoahana maty: habe lehibe kokoa, ary fiainana maherin'ny 50000 tifitra bobongolo.
Fitaovana 5.Inspection: CMM
Manao orinasa na mpanamboatra ve ianao?
Izahay dia mpanamboatra casting casting, fanariana fampiasam-bola, fanariana fasika, fametahana cnc, fivoriambe.
Ny maty dia sokajiana ho: lavaka tokana, lavaka maro, fitambarana ary singa iray maty.
Ny lavaka tokana tokana dia tsy mila fanazavana. Ny lavaka maro dia maty manana lavaka maro izay mitovy avokoa. Raha misy lavaka amin'ny endrika samihafa ny maty dia antsoina hoe fitambarana na fianakaviana maty izany. Ny die mitambatra dia ampiasaina hamokarana faritra maro ho an'ny fivoriambe. Ho an'ny ampahany tsotra, ny dies unit dia azo ampiasaina hanatanterahana ny toekarena sy ny famokarana. Sombin-javatra marobe ho an'ny fivoriambe, na ho an'ny mpanjifa samihafa, dia mety hatsipy miaraka amin'ny fahafatesan'ny singa. Ny fatin'ny iray na maromaro dia mivondrona ao anaty mpihazona iraisana ary ampifandraisin'ireo mpihazakazaka amin'ny lavaka fanokafana na sprue iray. Io dia mamela ny famenoana ny lavaka rehetra miaraka.
Casting Dies sy ny fananganana azy ireo
Ny famoahana maty dia vita amin'ny vy vy vita amin'ny firaka amin'ny fizarana roa farafahakeliny antsoina hoe ra maty maty ary antsasaky ny ejector maty. Ny antsasany maty raikitra dia apetaka amin'ny sisiny mankamin'ny rafitra fanindronana vy narendrika. Ny antsasaky ny ejector dia maty, izay anarahan'ny maty casting, ary avy eo no amoaka azy rehefa nosokafana ny maty, dia apetaka eo amin'ny lohan'ilay masinina.
Ny antsasaky ny maty voafetra dia natao mba hahitana ilay lavaka sprue izay hidiran'ny vy an-idina ao amin'ilay maty. Ny antsasaky ny ejector dia matetika misy ny mpihazakazaka (lalana andalana) ary ny vavahady (fidirana) izay manisy vy metaly mankany amin'ny vava (na lavaka) an'ny maty. Ny antsasaky ny ejector dia mifandray amin'ny boaty ejector izay mametraka ny mekanisma hanesorana ny fanariana ny maty. Mitranga ny fivoahana rehefa mandroso ny tsimatra mifandraika amin'ilay takelaka ejector hanery ny fanariana avy any an-davaka. Matetika izany dia mitranga ao anatin'ny kapoka fanokafana ny masinina. Ny fametrahana ny tsimatra ejector dia tsy maintsy alamina tsara ka ny hery apetraka amin'ny fanariana mandritra ny fivoahana dia tsy hiteraka fiovana. Avereno ny tsimatra miverina amin'ny takelaka ejector ity takelaka ity amin'ny toerany rehefa mihidy ny maty.
Ny cores miorina sy mihetsika dia matetika ampiasaina amin'ny maty. Raha raikitra dia tsy maintsy mifanitsy amin'ny làlan'ny fanokafana ny axis core. Raha mihetsika dia matetika miraikitra amin'ny slide slide izy ireo. Raha toa ka mitaky fahaketrahana ny lafin'ny famolavolana maty, dia azo atao amin'ny sary mihetsika iray na maromaro ny faty mba tsy hisy fiantraikany amin'ny famoahana ny fantsom-pako avy amin'ny lavaka maty. Ny sary mihetsika sy ny cores rehetra azo afindra dia tsy maintsy apetraka tsara, ary manana ny fahaizana hidiana am-pilaminana amin'ny toerany mandritra ny tsingerin'ny fanariana. Raha tsy izany dia azo terena hidina ao anaty slideways -n'izy ireo ny metaly metaly izay manelingelina ny asa. Na dia manampy amin'ny fahasarotana sy ny vidin'ny fananganana maty aza ny slides sy ny cores, dia ahafahan'izy ireo mamokatra casting amin'ny diezy maro karazana, ary matetika ara-toekarena kokoa noho ny fizotran'ny asa vy hafa rehetra.
Inona ireo milina mangatsiaka?
Ny milina mangatsiaka dia tsy mitovy amin'ireo milina efi-trano mafana amin'ny lafiny iray; ny plunger tsindrona sy varingarina dia tsy asitrika amin'ny vy metaly. Ny metaly metaly dia arotsaka ao anaty "efi-trano mangatsiaka" amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo na ny fantsom-bozaka arotsaka amin'ny alàlan'ny tanana na lovia mandeha ho azy. Ny plunger mandeha amin'ny alàlan'ny hydraulika, mandroso, manisy tombo-kase ny seranan-tsambo manery metaly ho faty mihidy amin'ny tsindry mafy. Ny tsindry tsindrona dia manomboka amin'ny 3,000 ka hatramin'ny 10,000 psi ho an'ny alimo aluminium sy magnesium, ary 6,000 ka hatramin'ny 15,000 psi ho an'ny alika fototra varahina.
Sary 2: Masinina efitrano mangatsiaka. Ny sary dia maneho ny maty, efitrano mangatsiaka ary ram na plunger marindrano (amin'ny toerany).
Ao anaty masinina efitra mangatsiaka, metaly metaly anidina no arotsaka ao anaty efi-trano noho ny ilaina hamenoana ny lavaka maty. Izany dia manampy amin'ny fametahana tsindry ampy hamenoana ny lavaka amin'ny alika fanariana. Ny metaly tafahoatra dia esorina miaraka amin'ny fanariana ary ampahany amin'ny tifitra feno.
Ny fiasan'ny masinina "efitra mangatsiaka" dia somary miadana kokoa noho ny masinina "efitrano mafana" noho ny fiasan-doha. Ny milina mangatsiaka dia ampiasaina amin'ny alim-pandefasana teboka avo lenta satria ny fivorian'ny plunger sy ny varingarina dia tsy iharan'ny fanafihana satria tsy tototry ny metaly metaly.
Inona avy ireo milina efi-trano mafana
Ny milina efi-trano mafana dia ampiasaina indrindra ho an'ny zinc, ary ireo metaly matevina ambany izay tsy manafika mora foana ary manafoana ireo vilany vy, varingarina ary plunger. Ny haitao mandroso sy ny fampandrosoana ireo fitaovana vaovao sy hafanana avo lenta dia nanitatra ny fampiasana an'io fitaovana io ho an'ny alimisy maneziôma. Sary 1: Masinina efi-trano mafana. Ny kisary dia maneho ny mekanisma plunger izay milentika anaty metaly metaly. Ny milina maoderina dia miasa amin'ny alàlan'ny hydraulic ary miaraka amina fanaraha-maso bisikileta mandeha ho azy sy fitaovana fiarovana.
Ao amin'ny milina efi-trano mafana, ny mekanisma fanindronana dia alentika amin'ny metaly metaly ao anaty lafaoro mifatotra amin'ilay masinina. Rehefa atsangana ny plunger dia misy varavarana misokatra mamela vy metaly hameno ny varingarina. Rehefa mihetsiketsika ambany ny plunger manisy tombo-kase ny seranan-tsambo dia manery vy metaly mamakivaky ny gooseneck sy ny nozy mankany amin'ny maty. Rehefa avy mihamafy ny vy dia esorina ny plunger, misokatra ny maty ary esorina ny casting.
Miasa haingana ny milina mafana. Ny vanim-potoanan'ny tsingerina dia miovaova arakaraka ny iray segondra ho an'ireo singa kely milanja latsaka ny iray grama ka hatramin'ny telopolo segondra ho an'ny famoahana kilao marobe. Vonoina haingana ny maty (ara-dalàna eo anelanelan'ny dimy sy efatra-polo millisecond) ary ny metaly dia atsindrona amin'ny tsindry avo (1,500 ka hatramin'ny 4,500 psi). Na eo aza izany, ny teknolojia maoderina dia manome fifehezana akaiky ireo soatoavina ireo, ka mamokatra casting miaraka amin'ny antsipiriany tsara, fandeferana akaiky ary tanjaka lehibe.
Karazana masinina hanaovana fanariana maty
Na inona na inona ny karazana masinina ampiasaina dia ilaina ny mihidy tsara ny antsasany sy ny cores ary / na ireo faritra hafa mihetsika hafa mandritra ny fihodinan'ny fanariana. Amin'ny ankapobeny, ny herin'ny famonoana ny masinina dia fehezin'ny (a) ny velarantanin'ny fananganana (refesina amin'ny tsipika fizarazarana maty) ary (b) ny tsindry ampiasaina hampidirana vy amin'ny maty. Ny ankamaroan'ny masinina dia mampiasa mekanisma karazana toggle izay ampandehanan'ny varingarina hydraulic (indraindray ny tsindry ataon'ny rivotra) hahatratrarana ny fanidiana. Ny sasany kosa mampiasa tsindry azo avy amin'ny hydraulic mivantana. Ny rafi-pitantanana fiarovana dia ampiasaina mba hisorohana ny maty tsy hisokatra mandritra ny fihodinan'ny casting.
Ny milina fanariana maty, na lehibe na kely, dia tsy miova afa-tsy amin'ny fomba fampiasa amin'ny fampidirana vy an-idina amin'ny maty. Ireo dia sokajiana ary faritana ho milina fanariana maty na mafana na mangatsiaka.
Ahoana no ahalalako izay dingana mety indrindra amin'ny filako?
Misy fomba maromaro hilazana hoe inona ny fizotran'ny famoahana maty na ny famolavolana drafitra izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao, amin'ny fampiasana fepetra maromaro. Jereo ny takelaka momba ny famolavolana drafitra famolavolana jeneraly an'i Minghe raha mila fanazavana fanampiny.
Inona no atao hoe Die Casting?
Ny fanariana ny maty dia dingana fanariana vy, izay miavaka amin'ny alàlan'ny faneriterena avo amin'ny vy anidina amin'ny alàlan'ny lavaka famolavolana. Matetika ny bobongolo dia vita amin'ny alloys mahery kokoa. Ity dingana ity dia somary mitovy amin'ny famolavolana tsindrona. Ny ankamaroan'ny fanariana maty dia tsy misy vy, toy ny zinc, varahina, aliminioma, manezioma, firaka, firapotsy ary firaka vita amin'ny firamainty sy alloys. Miankina amin'ny karazana fanariana maty, ilaina ny milina famonoana efitrano mangatsiaka na ny milina famonoana efitrano mafana.
Ny teny hoe "casting gravity die" dia manondro fanariana vita amin'ny metaly amina lohan'ny hery misintona. Fantatra amin'ny fanariana bobongolo maharitra any Etazonia sy Kanada izy io. Ilay antsointsika hoe "casting casting" eto dia fantatra amin'ny hoe "casting die pressure" any Eropa.